ट्याटूहरूको लागि पत्र, तिनीहरू के मन पराउँछन्? १ download डाउनलोड गर्न सकिने ट्याटु फन्टहरू क्रिएटिव अनलाइन
ट्याटूहरूको लागि पत्रहरू
ट्याटूहरूको लागि त्यहाँ धेरै अक्षरहरू छन्, र हामी अर्डर गर्दै छौं आज तपाईलाई सबैभन्दा हडताल गर्ने देखाउन र त्यो ट्याटूको लागि मार्गनिर्देशनको रूपमा काम गर्न सक्छ जसमा तपाईं हड्तालपूर्ण वाक्यांश वा एक प्रेरणादायक शब्द हाईलाइट गर्न चाहानुहुन्छ जुन आफैसँग गर्नुपर्दछ वा तपाईंको भविष्यको लागि महत्त्वपूर्ण जीवनको केही घटनाहरू।
ट्याटूहरूको लागि पत्र प्रयोग गर्न तपाईंलाई केही सुझावहरू दिनुको अलावा हामी पनि जान्छौं ट्याटूहरूको लागि तपाईंलाई बिभिन्न प्रकारका अक्षरहरू सिकाउन जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईं अझ राम्ररी निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ जुन फाइनल हुने छ। पातलोबाट ती, ती इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामका लागि वा ती इन्टरलेस्ड जुन तपाईले भर्खरै गर्नुभएका अन्य ट्याटूसँगसँगै उत्तम हुन सक्छ। हामी ट्याटूलाई राम्रोसँग छनौट गर्न गइरहेका छौं जुन धेरै वर्ष सम्म हाम्रो छालामा छापिएको छ।
1 ट्याटु को लागी एक पत्र हुनु पर्छ
1.1 अन्य सुझावहरू
2 ट्याटूहरूको लागि टाइपफेसहरू
2.2 इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामको लागि
2.4 सानो ट्याटूहरूको लागि
3 ट्याटूका लागि सबै भन्दा राम्रो अक्षरहरू
3.1 परी आँसु
3.2 एंजिला ट्याटू
3.5 मासुमा मसी
3.6 मूल गै Gang्ग्स्टा
3.7 ट्याटु मसी
3.8 देहाती प्रेम टैटो
3.9 Ginga फन्ट
3.11 सँधै तपाईको फन्टको छेउमा
3.13 नाविक एसडी
3.15 गुलाब टैटू
3.16 सत्य प्रेम फन्ट
ट्याटु को लागी एक पत्र हुनु पर्छ
सबै भन्दा पहिले, यो भनिएको हुनु पर्छ पत्र सबैको लागि होईन। ट्याटूहरूको लागि बिभिन्न प्रकारका अक्षरहरू राम्ररी अनुसन्धान गर्न तपाईंले समय निकाल्नुपर्दछ र यस क्षेत्रका सर्वश्रेष्ठ को हो भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग पनि स्रोतहरूको एक अपूरणीय स्रोतको रूपमा इन्स्टाग्राम छ र जसमा हामी हाम्रो आवश्यकता र चाहनाको लागि त्यो त्यो सही लेटरिंग ट्याटु पत्ता लगाउनको लागि मार्गदर्शन गर्न सक्दछौं।
अर्को महत्त्वपूर्ण सल्लाह त्यो हो ट्याटु को लागी पत्र उस्तै भावना मिल्नु पर्छ टाटु अर्को शब्दमा, अक्षर ट्याटू तपाईं आफ्नो ट्याटु को लागी भावना प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ। सही फन्टले यो प्रभाव हासिल गर्दछ र बाँकी कसरी राम्रो छनौट गर्ने भन्ने कुराको कुरा हुनेछ। न त तपाईं पत्र गहना द्वारा टाढा हुनु पर्छ।
हामी यो भन्छौं किनकि धेरै गहनाले गर्न सक्दछ पत्रको स्पष्टता धमिलो पार्नुहोस् र अन्त मा तपाईं यसलाई पढ्न को लागी पढ्न को लागी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि ट्याटुमा रहेको अक्षर एकदम स्पष्ट र उत्तम रूपमा देखिने छ। अर्को बिन्दुलाई ध्यानमा राख्नु भन्ने हो कि ती अक्षरहरू जुन हामीले छनौट गर्न लाग्यौं त्यो मूल संरचना हुन्छ जुन सुवाचिको हुनु पर्छ।
त्यो हो, उच्चारण र उत्तम लेखन ट्याटु अर्को अनिवार्य बिन्दु हुनुपर्दछ। यद्यपि यो बुझ्न सक्दछ कि यस समयमा ट्याटु कलाकारले हस्तलेखन गल्तीहरू गर्दैन।
न हामी ट्याटु को लागी अक्षरको आकारलाई बेवास्ता गर्न सक्छौं। कुनै पनि राम्रो ट्याटू जस्तै तपाईलाई यसका अक्षरहरू चाहिन्छ जहाँ शरीरको अंश यो उपस्थित हुन्छ। यदि हामी माथिल्लो फिर्ता लिन्छौं भने, यो लिनुपर्नेछ बाट पूर्ण चौडाइ स्कापुला अर्को सम्म एउटा सानो आकार भ्रामक हुन सक्छ र ती सबै बल दिदैन जुन फन्ट वा टाइपफेसले ती खाली ठाउँहरूमा राम्रोसँग लिन्छ।
र जब तपाई ट्याटू को लागी तपाईको डिजाईन छान्नुहुन्छ, सधैं ट्याटू कलाकारलाई सल्लाहका लागि सोध्नुहोस्। यदि ऊ एक पेशेवर हो भने, उसले कसरी टाटुको प्रकार, आकार र जहाँ स्थान राख्ने ठाउँमा राम्रोसँग सल्लाह दिने भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। र सधैं, भन्नको लागि विश्वमा सबै समय लिनुहोस्। जीवनमा सबै चीजहरू जस्तै, हतार र चाँडो चीजहरू प्रायः राम्रो हुँदैन।
अन्तमा, यी दिनहरू तपाईसँग छ ट्याटू कलाकारको अनलाइन पोर्टफोलियो हेर्ने सम्भावना तपाइँको कुनै पनि खातामा। यदि तपाईं एक भौतिक स्टोर जानुभयो, यो एक कार्ड हुनेछ। यसको लागि सोध्नुहोस् र उनीहरूको कामको बारेमा ध्यान दिनुहोस् र उनीहरूको सामाजिक नेटवर्कमा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंले छिटो महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईं समक्ष जो तपाईंसंग शान्त हुनुहुन्छ र आफैंलाई तिनीहरूको हातमा छोड्नुहोस्। र सँधै, यदि तपाईंसँग पैसा छ भने, तपाईं तिनीहरूको सेवाहरू अनुरोध गर्न विशिष्ट पत्रमा सबै भन्दा राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो पत्र ट्याटु उत्तम प्रोफेशनलले काम गरेको हुन सक्छ। आज त्यहाँ धेरै बजार आला, र ट्याटु बजारमा उस्तै चीज हुन्छ।
यो धेरै सानो नबनाउनुहोस्। तपाईंलाई आफ्नो ठाउँ चाहिन्छ। सोच्नुहोस् कि समयसँगसँगै मसीले शक्ति गुमाउनेछ र यदि तपाइँ यसलाई सानो बनाउनुहुन्छ भने, रेखाहरू मिसिन्छ र हामीले खोजेको स्पष्टता हराउन सक्छ। त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि यो सहि आकार हो त्यसैले समयले यो बिगार्दैन; यहाँ हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाई ट्याटू कलाकारलाई पत्रको स्थान र आकारका साथ सहयोगका लागि सोध्नुहोस्।
यदि तपाईं राख्न लाग्नुभएको छ ट्याटूमा अक्षर रेखांकित गर्ने रेखा, त्यो ठोस र राम्रोसँग परिभाषित छ। यसलाई समयमै राख्नको लागि यो एक मात्र तरीका हुनेछ।
ट्याटूहरूको लागि टाइपफेसहरू
हामीले आफूलाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्दछ हाम्रो ट्याटु को लागी पत्र को शैली, किनकि यो विशिष्ट शैलीको लागि पतन सजिलो छ किनकि यो कति राम्रो देखिन्छ। तर केवल टाइपोग्राफिक फन्टहरू जस्तै, प्रत्येक टाइपफेस एक अर्थसँग सम्बन्धित छ जुन यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ। उदाहरण को लागी, केहि गॉथिक वा स्क्रिप्ट क्यालिग्राफी ब्यान्ड संग सम्बन्धित छ। हामी यसो भनिरहेका छैनौं कि तपाईं तिनीहरूलाई लैजान सक्नुहुन्न, तर तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंले के गर्न खोज्नु भएको छ।
यसको धेरै नामले संकेत गर्दछ चिट्ठी को परिष्कृतता ताकि यो पूर्ण रूपमा पढ्न योग्य छ। सानो ट्याटूका लागि उत्तम, यद्यपि ठूला आकारका लागि यो एकदम काम आउँदछ। हामीले ती ताराहरू, ती चन्द्रमाहरू देख्यौं जुन आदर्श हो। तिनीहरू प्रायः ती स्थानहरूमा हुन्छन् जुन पहिलो दृष्टिमा मुश्किलसँग देखिन्छन्।
यस प्रकारको ट्याटू फन्ट यसको द्वारा विशेषता हो EKG लाइन अन्त्य हाम्रो प्रियको नाममा वा त्यो आदर्श वाक्यांश हाम्रो जीवनको केही महत्त्वपूर्ण क्षण प्रतिनिधित्व गर्न।
एक जोडीको नामको इनिसियल्स यस प्रकारको लागि आबद्ध गर्न सकिन्छ धेरै अर्थपूर्ण र समयमै ट्याटूको। सत्य यो हो कि त्यहाँ तिनीहरूको एक धेरै विविधता छ र धेरै वास्तविक। एक बाट तीर र प्रियको नाम बाट अर्को बाट एक तीर र प्रियको नाम। यस प्रकारको पत्र ट्याटुको अर्को गुण यो हो कि यसलाई अन्य प्रकारका अक्षरहरू जत्तिकै ठाउँको खाँचो पर्दैन।
सानो ट्याटूहरूको लागि
घाँटी को लागी सानो टैटू, नाडी वा टाउकोमा लुकाउन लाई जुन एक सानो प्रिन्टको साथसाथै विशेषता हो। एक साँच्चै हास्यास्पद एक यस्तो छ "मुस्कान": sm :) e।
गथिकसँग सधैं यसको उत्कृष्ट सार्वजनिक हुन्छ र स्टाइलिश गीतहरू जुन तिनीहरूको द्वारा चित्रण गरिएको छ उल्टो आकार र त्यो अँध्यारो पोइन्टले दिन्छ कि यो त्यो दिन्छ।
ट्याटूका लागि सबै भन्दा राम्रो अक्षरहरू
यो ट्याटू अक्षर लेख्ने शैली मसीको जस्तो देखिन्छ। Lss पत्र आकारहरू तिनीहरू थोरै बाक्लो छन्यद्यपि तिनीहरूसँग उत्कृष्ट शैलीको हुनको लागि अझ उत्कृष्ट छ। एक क्लासिक फन्ट जुन सबैको ध्यान नहुने गरी अन्तमा छनौट गरिएको पत्र हुन जान्छ।
वेबमा लिंक: निर्वहन
यसको वजनको लागि अर्को हड्काउने फन्ट र त्यससँग केही टी छविशेष oques परिभाषित गर्न उत्कृष्ट रूपमा। विस्तृत फन्ट जुन धेरै नारी नै छैन र पहिलो दृष्टिमा पूर्ण रूपमा सुगम छ। यस फन्टले साना अक्षरहरू र विराम चिन्हहरू समावेश गर्दछ जुन हाम्रो ट्याटुको लागि आवश्यक छ।
यो पत्र द्वारा परिभाषित गरिएको छ यसको सेरिफ धेरै छिटो छ, बाक्लो लाइनहरू र पुरानो-स्कूल टचको साथ जो कोही पनि उदासीन हुँदैन। यो दुबै पूर्वनिर्धारित र छायादार शैलीहरूमा उपलब्ध छ। शक्ति संग एक स्रोत।
यो टाइपफेस किनभने विशेष छ क्रस को महान विविधता, हृदय, कुञ्जी र अधिक समावेश छ। यो अर्कोसँगको साथ यो उत्तम छ र यसरी हाम्रो ट्याटूलाई अधिक सामर्थ्यको लागि आवश्यक ती प्रतीकहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
यो टाइपफेस हुन सक्छ हामीले माग्न सक्ने सबै चीजको नजीक ट्याटूको लागि हस्तलेखनमा। एक फन्ट जसले अरू ट्यागका ती ट्याटूहरूको मेमोरी ल्याउँदछ र त्यो प्रेरणा र प्रयोगको लागि पूर्ण प्रकारको हुन्छ।
मूल गै Gang्ग्स्टा
हामी टाइपफेसको सामना गरिरहेका छौं धेरै एल्बमको सम्झनाहरू जगाउँदछ s ० को दशकबाट हिप हप संगीत। धेरै विशिष्ट शैलीको साथ जुन हामीलाई "Baddest" भएको सम्झना दिलाउन सक्छ; हामीले पहिले नै यस किसिमको स्टाइलको साथ ट्याटू लगाउनुको अर्थको बारेमा कुरा गरिसकेका छौं।
अर्को quirky फन्ट र त्यो «आमाको माया» ट्याटु प्रतिलिपि गर्नका लागि स्ट्राइक गर्दै। बोल्ड अक्षरहरू जुन आंशिक रूपमा सेतोमा भरिन्छ शीर्षमा। ठूला अक्षरहरूमा अक्षरका आकारहरूमा विभिन्न प्रकारका प्याडिंगका साथ दुई प्रकारहरू समावेश छन्।
देहाती प्रेम टैटो
फोहरा धेरै अनौपचारिक हुनुको लागि प्रहार गर्दै र यो बाँकीको तुलनामा ताजा हवा छ।
एक दाग, तर स्टाइलिश फन्ट यसको कर्भका लागि र ती गहनाहरु को लागी भावना पैदा गर्न को लागी आवश्यक छ कि यो वास्तव मा कलम संग चित्रित गरिएको छ।
यो सबैका लागि सबै भन्दा विशेष फन्ट हो ती आदिवासी चिह्नहरू कि यस टाइपफेस को हरेक अक्षरहरु लगाउँछन्।
सँधै तपाईको फन्टको छेउमा
यसका साथ एक सुलेख शैली फन्ट खुला घटता र लगभग अनन्त समाप्त यस सूचीमा क्लासिक मध्ये एक हुन।
मध्येको एउटा अक्षरहरूका लागि उत्तम फन्टहरू ट्याटू सूची। अपरिहार्य।
हामी कसरी राख्न सकेनौं नाविकमा आधारित फन्ट? यहाँ हामीसँग ती खाली खाली ठाउँहरू र त्यो आत्म-विश्वास छ जुन यो पहिलो क्षणबाट अभिव्यक्त हुन्छ।
एक मानवशास्त्र स्रोत द्वारा यसको अर्थ र यसको महान शैली। अझ भन्नु हुँदैन।
यो जस्तै एक समाप्त छ यदि मसी पग्लिरहेछ भने उही अक्षरहरूमा।
सत्य प्रेम फन्ट
उनले यो सबै आफ्नो साथ भन्छन् बाक्लो फन्टमा आफ्नै अर्थ, जबकि माथिल्लो र तल्लो भागहरूमा ठीक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » ट्याटूहरूको लागि पत्रहरू
कुनै डाउनलोड लिंक जान सक्दैन
पहिले नै समाधान गरिएको। सादर!
अमेजन तपाईंलाई आफ्नो हातको साथ तिर्न चाहन्छ